जनकपुरमा हिन्दु कार्ड - समसामयिक - नेपाल
जनकपुरमा हिन्दु कार्ड
जनकपुर– उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जनकपुर आउने टुंगो लागेपछि फेसबुकमा राजाराम यादवले कमेन्ट लेखे, ‘ये भाजपावाला इतना जनकपुर क्युँ आता है ? कुछ तो लोचा है ।’
२६ मंसिरमा राम–जानकी विवाहोत्सवमा जन्ती बनेर आउने आदित्यनाथलाई ‘नेपालमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि लबिइङ गरेको व्यक्ति’ करार गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले ५ मंसिर साँझ पत्रकार सम्मेलन नै गर्‍यो । कांग्रेसको संशय छ, ‘आदित्यनाथको भ्रमणले नेपालमा राजनीति अस्थिरता ल्याउन सहयोग पुग्छ ।’ पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ताले पनि आदित्यनाथलाई ‘वार्म वेलकम’ गरिएको फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भारतको जातीय राजनीतिको धर्मान्ध शासनमा जनकपुर रूपान्तरणको अभ्यास गर्दैछ । काठमाडौँको रंग चढ्दैछ, जनकपुरमा ।’
रामको जन्मभूमि अयोध्या आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री रहेको उत्तर प्रदेशकै धार्मिक सहर हो । राजनीतिमा छिर्नुअघि उनी योगी (साधु) नै थिए । जनकपुर सीताको जन्मभूमि । यी दुवै धार्मिक सहरबीच त्रेतायुगदेखिकै सम्बन्ध छ । उसो भए आदित्यनाथ जन्ती बनेर आउनुले दुई देशका धार्मिक सहरबीचको सम्बन्धमा सघनता नै थप्नुपर्ने होइन ? किन आपत्ति जनाउँदैछन्, दलहरू ?
विश्लेषक चन्द्रकिशोर मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमणलाई धार्मिक यात्रा मात्र मान्दैनन् । धार्मिक यात्रामा लुकेको हिन्दुत्वको फाइदा आसन्न भारतीय निर्वाचनमा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई हुने र त्यसैका लागि निर्वाचनको सँघारमा आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमण तय गरिएको उनको बुझाइ छ । “उत्तर भारतका राज्यहरूमा भाजपा जनमत बढाउने ध्येयमा छ,” विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन सक्रिय रहेको सन्देश दिन पनि भाजपा हिन्दु कार्डलाई मलजल गरिरहेको छ ।”
सन् १५२८ मा अयोध्यामा बाबरी मस्जिद निर्माण गरियो । हिन्दु मान्यताअनुसार मस्जिद बनाएकै स्थलमा रामको जन्म भएको थियो । रामका अनुयायीहरूको आरोप छ, मन्दिरलाई भत्काएर त्यहाँ मस्जिद बनाइयो । हिन्दु–मुस्लिमबीच कयौँ चरणका हिंसात्मक घटनापछि यो विवाद भारतको सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ । विश्व हिन्दु परिषद् (बीएचपी) ले राम मन्दिर निर्माणका लागि आन्दोलनको अगुवाइ गर्‍यो । सन् १९८९ को जुनमा भाजपाले बीएचपीलाई औपचारिक समर्थन दिँदै राम मन्दिरको आन्दोलनमा मिसियो । भारतमा कुल जनसंख्याको ७९.८ प्रतिशत (९६.८ करोड) हिन्दु धर्मावलम्बी छन् ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दामा विपक्षी कंग्रेस आईको घेराबन्दीमा परेको सत्तासीन भाजपालाई सन् २०१९ को निर्वाचन सहज देखिन्न । नोटबन्दी, राफेल लडाकू विमान खरिद प्रकरण र सीबीआईका उपल्ला अधिकारीलाई रातारात पदमुक्त गरेको विवादमा भाजपालाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत विपक्षीले घेराबन्दीमा पारेको छ ।
महँगी र भ्रष्टाचारको मुद्दामा विपक्षीको तारो बनेको भाजपासँग हिन्दुत्वको बलियो अस्त्र बाँकी छ । अदालतमा विचाराधीन रहे पनि अध्यादेश ल्याएरै अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गरिने उसको पछिल्लो अडान आसन्न चुनावमा हिन्दु मत बटुल्नकै लागि देखिन्छ । भाजपाको यही हिन्दुत्वको कार्डमा जनकपुर जेलिएको छ । सीतालाई भारतका हिन्दुले सतीसावित्री ठान्छन् । उनको जन्मभूमि जनकपुरप्रति भारतीयको अगाध आस्था छ ।
भारतीय हिन्दुको जनकपुरप्रतिको त्यही आस्था र विश्वासलाई भाजपाले चुनावी तुरुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । “राजनीतिमा हिन्दुत्वको कार्ड बलियो छ,” विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “त्यसको प्रयोग जनकपुरबाट नहोस्, त्यसबाट बच्नुपर्छ । तर, हेभिवेटको भ्रमणले हुने पर्यटकीय फाइदा भने लिनुपर्छ ।”
२८–२९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण धार्मिक यात्रा रहे पनि त्यसलाई भारतीय राजनीतिसँग जोडेर हेरियो । मोदी जनकपुर र मुक्तिनाथ पुग्दा कर्नाटकमा सरकार बनाउने नजिकको बहुमत भाजपाले पाएको धेरैले आँकलन गरे ।
बुद्धिजीवी सञ्जय सिंह धार्मिक यात्रामा लुकेको ‘स्वार्थ’ यात्रुबाहेक अरूले किटानी गर्न भने नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल–भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेकाले दुवै देशका उच्च तहमा हुने भ्रमणलाई हिन्दुत्वसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । “नेपाल–भारतबीच प्राचीन सम्बन्ध छ । जनकपुर–अयोध्याको आफ्नै खाले भाइचारा,” सिंह भन्छन्, “पुरानै सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन भ्रमण हुन लागेको हो । त्यसबाट दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ ।”
संशय किन ?
पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मोदीले चारपटक नेपाल भ्रमण गरे । उनको तेस्रो नेपाल भ्रमण २८ वैशाखमा सीधै जनकपुरबाट भयो । मोदीले आफैँ जन्ती बनेर जनकपुर आउने इच्छा राखेका थिए । तर, उनको भ्रमण अनिश्चित बनेपछि हिन्दु बाहुल्य क्षेत्रमा भाजपाका स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमण तय गरिएको हो ।
आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमण तयारी प्रदेश २ को सरकार र जानकी मन्दिर व्यवस्थापनले थालेका छन् । जन्तीको भेषमा आउने आदित्यनाथले जानकी मन्दिरमा विशेष पूजाअर्चना गर्नेछन् । विवाहपञ्चमीमा नेपाल–भारतका हजारौँ धर्मावलम्बी जनकपुर पुग्छन् ।
आदित्यनाथ नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउन वकालत गर्ने भारतीय साधु पनि हुन् । भारतको गणतन्त्र दिवसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आमन्त्रण गर्ने रणनीति असफल भए पनि राजसंस्थाका पक्षपोषक आदित्यनाथको नेपाल भ्रमणले हिन्दुत्व कार्डलाई तरंगित बनाएको छ । “मोदी वा योगी उनीहरू हिन्दु कार्ड खेल्न पोख्त छन्,” प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, “हिन्दु कार्डको नाममा वा यसलाई विवादको भूमरीमा राखेर दुई देशको सम्बन्ध बिगार्नु हुन्न ।” प्राध्यापक लाभका अनुसार मोदी वा योगी भ्रमणले चुनावमा भाजपालाई फाइदा पुगे पनि सबै कुरा छर्लंग्याउँदा सम्बन्धमा असर पर्छ ।
सीताको जन्मभूमि जनकपुर र रामको अयोध्या । त्रेतायुत्रमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भयो । नेपाल र भारतबीच उहिलेदेखि रोटीबेटी, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ ।
भगवान् राम–सीताको विवाहको सम्झनामा हरेक वर्ष मंसिरमा जनकपुरमा विवाहपञ्चमी महोत्सव आयोजना हुन्छ । नेपाल र भारतका हजारौँ तीर्थालु सहभागी हुने महोत्सवमा अयोध्याबाट जन्ती आउने चलन छ । विसं ०६१ देखि अयोध्याबाट समूहमै जन्ती आउने परम्परा बसेको छ ।
जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दासले विवाहपञ्चमीमा भारतबाट विशेष पाहुना आउन लागेकाले यसपालि भव्य आयोजना गरिएको बताए । उनका अनुसार आदित्यनाथ आफैँ ५ सय जन्ती बोकेर विवाहपञ्चमीमा जनकपुर आउँदैछन् । तर, सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुर–अयोध्याको सम्बन्ध र यसलाई जोड्न प्राथमिकता दिएको बताउँछन् ।
जनकपुर–अयोध्याबीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन भारतले रामायण सर्किटमा जनकपुरलाई पनि जोडेको छ । २८ वैशाखमा जानकी मन्दिरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले हरियो झन्डा देखाएर जनकपुर–अयोध्या सीधा बस सेवा शुभारम्भ गर्दै रामायण सर्किट उद्घाटन गरे । रुट परमिट र यात्रु अभावमा बन्द जनकपुर–अयोध्या बस सेवा सातायता फेरि गुड्न थालेको छ ।
भारतीय रेलवेले रामायण एक्सप्रेस नामक रेलसेवा रामायण सर्किटसँग जोडिएको स्थानबाट गुडाउन सुरु गरेको छ । राम र सीतासँग जोडिएको स्थलमा पुग्ने यो रेलसेवामा जनकपुरलाई पनि समेटिएको छ ।
नयाँ दिल्लीबाट गुड्ने रामायण एक्सप्रेस रेल भारतको अयोध्या, नन्दीग्राम, सीतामढी, नेपालको जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकुट, नासिक, हम्पी हुँदै रामेश्वरम पुग्नेछ । नेपाल र भारतका ११ स्थल छिचोल्ने रेलले १६ दिनमा यात्रा पूरा गर्नेछ ।
रामायण सर्किटमा गुड्ने रेलका यात्रु रामेश्वरम्बाट हवाईजहाजमा श्रीलंकासम्म पुग्न सक्नेछन् ।
प्रकाशित: मंसिर ९, २०७५